Miverina ho an'ny Herinandron'ny lamaody maoderina ho an'ny lehilahy any Milan ny Dada Dadabe
Mankahala na mitia azy, niverina ny "kiraro dadanay" tamin'ny herinandro maoderina lamaody Milan Men. Miaraka amin'i Gucci Recalibrating ny kalandriany sy Miuccia Prada hizara ny jiro amin'ny RAF Simons hatramin'ny volana septambra, lohataona '21 dia nanamarika vanim-potoana fifandimbiasana ho an'ny tarika manerana ny birao. Fa tsy hikaroka ...
Ny mpitondra ny indostrian'ny lamaody sy ny dian-tongotra dia miantso ny governemanta hampihatra ny torolàlana "tsy miova" ho an'ny fampiasana saron-tava ho an'ny marika amin'ny tsimokaretina Corona. Tao anaty taratasy iray natolotry ny filoha Donald Trump, ny American Apparel and Footwear Association - izay maneho mihoatra ny 1 ...
Ny kalitao avo sy ny serivisy tsara
Mametraka kiraro azo antoka 5 ho an'ny orinasanay ny fitondram-panjakana any Shina, miaraka amina hoditra feno voa malefaka sy feno rivotra. Ny efitrano fivoaranay dia nanao ezaka manokana mba hifantohana amin'ny fanaovana ireo santionany ireo ary vao naharitra 2 herinandro vao vita tsara izany rehetra izany. Ny fahombiazantsika sy ny serivisy tsara dia nahazo fiderana avo ...